प्रधानमन्त्रीलाई घनश्याम भुसालको प्रश्न– भोट हालेपछि हाम्रो राजनीतिक हत्या गर्ने ? - हाम्रो देश
पार्टीभित्रको अन्तरकलह यथावत राखेर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्‍नुमा षडयन्त्रको गन्ध आएको भन्दै आफूहरु सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा छलफल भएको नेता घनश्याम भुसालले रातोपाटीलाई बताए । के तपाईहरुले सांसद पदबाट सामुहिक राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा नेता भुसालले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–
त्यसैका कारणले गर्दाखेरि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार हामीकहाँ आएको छ । दक्षिणपन्थीहरुसँग मिलेर हामीमाथि कारवाहीका लागि उहाँहरुले तयारी गर्नुभएको छ । कारवाही त हामीलाई गर्ने नै छन् । बाहिरका शक्तिहरूसँग मिल्ने, पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई दबाउने, जेठ २ मा फर्कौं भन्दा नटेर्ने । यो भनेको एमाले पार्टी विभाजित गर्ने उनीहरुको सुनियोजित तरिका हो । सुनियोजित स्टेपहरु चालेर गएका छन् भनेर हामीले भनेकै छौं । त्यसैले हामीले राजीनामा दिनु राम्रो हो भन्ने मत हामीकहाँ आएको छ । पहिले भोट हाल्न लगाएर त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक हत्या गर्न खोजेजस्तो देखियो ।